Cuntooyinka ciribta ayaa loo dejiyay Agoosto 14 - Cuntooyinka Taayirrada
Cunnooyinka Cidhibtirka waxaa loo asteeyey Agoosto 14
Cunnooyinka Ciribta waa Xisbiga leh Ujeeddo iyo dariiq weyn oo lagu taageero Cuntooyinka Lugaha Lugta iyadoo lagu raaxeysto baashaal badan. Cuntada iyo moodada ayaa ku hor yaal bartamaha Meals on Heels, iyadoo kaqeybgalayaashu ay helayaan muunad ay doorteen kuugga 12 makhaayadaha maxalliga ah oo geli kara si loogu magacaabo horyaalkii weynaa ee Tartan Swank Soles loogu talagalay kabaha ugu fiican.
Dhacdada sanadkan waa Khamiista, Agoosto 14, markaa calaamadee jadwalkaaga oo bilow raadintaada kabaha ugu fiican. Waxaad ka heli kartaa dhiirigelin laadadkaaga, wax badan ka baro dhacdada iyo tikidhada ka iibso Cuntadaonheelsevent.org.
Meals on Heels waa fursad ay ku siinayaan taageerayaasha Meals on Wheels in ay isu soo baxaan si ay u baashaalaan oo ay wax badan uga ogaadaan sababta halka ay ku raaxeysanayaan liiska cuntada, cabbitaanka iyo madaddaalada tooska ah. Dhammaan wax-soo-saarka waxtarka leh ee Cunnooyinka Lugaha iyo martida ayaa sidoo kale fursad u heli doona inay galaan qoob-ka-ciyaarka ay ka buuxaan abaalmarinno aad u sarreeya oo laga helo ganacsiyada maxalliga ah
Waxaad sidoo kale kala socon kartaa wixii ku soo kordha Meals on Heels on Facebook iyo Twitter, oo fiiri sawirada sanadkii hore Flickr iyo hoos:
Juun 12, 2014